Nhau - Usatorerure pasi titanium dioxide mukupfeka
1. Basa re titanium dioxide mukupfeka
Kupfeka kunowanzo kuve nezvikamu zvina: firimu-inogadzira zvinhu, pigment, solvents uye zvinowedzera. Iyo pigments mune yekupfeka ine imwe yekuvanda simba. Iyo haingogone chete kufukidza iyo yekutanga ruvara rwechinhu chakaputirwa, asi zvakare ipa iyo yekupenda yakajeka ruvara. Ziva iyo yekushongedza mhedzisiro yekuvhenekesa uye kunaka. Panguva imwecheteyo, iyo pigment yakanyatso kusanganiswa neyekurapa mumiririri uye iyo substrate, uye yakasanganiswa, inogona kusimudzira masimba echimakanika uye kunamatira kweiyo yekumonera firimu, kudzivirira kutsemuka kana kudonha, uye kunogona kuwedzera ukobvu hweiyo yekunamatira firimu, kudzivirira kupinda kweiyo ultraviolet mwaranzi kana mwando, uye nekuvandudza kupfeka. Iyo anti-kuchembera uye kusimba zvinhu zvemufirimu zvinowedzera hupenyu hwebasa remufirimu uye chinhu chakachengetedzwa.
Mune iyo pigment, iyo yakawanda yechena pigment yakakura kwazvo, uye mashandiro ekuita kweiyo kupfeka kweiyo chena pigment: oodGood kuchena; Kukuya kwakanaka uye kunyorova; Mamiriro okunze akanaka ekudzivirira; OodGood makemikari kugadzikana; SizeSmall particle saizi, kuviga simba uye kurasikirwa Yakakwira Ruvara simba, opacity yakanaka uye kubwinya.
Titanium yakasviba rudzi rwechena pigment iyo inoshandiswa zvakanyanya mukupfeka. Kuburitsa kwaro kunoitisa zvinopfuura makumi manomwe kubva muzana zvezvinhu zvisina kujairika pigments, uye mashandisiro ayo anoita 95.5% yeiyo yakazara kudyiwa kwechena pigments. Parizvino, dzinosvika makumi matanhatu muzana yepasi rose titanium yakasviba inoshandiswa kugadzira machira akasiyana, kunyanya rutile titanium dioxide, mazhinji acho anodyiwa neindasitiri yekumhara. Iyo pendi yakagadzirwa ne titanium dioxide ine mavara akajeka, simba rakakwirira rekuhwanda, simba rakasimba rekutepa, muyero wakaderera, uye mhando zhinji. Iyo inodzivirira kudzikama kwepakati, uye inogona kusimudzira echimakanika simba uye kunamatira kwependi firimu, kudzivirira kutsemuka, uye kudzivirira ultraviolet mwaranzi. Inopinda nemvura uye inowedzera hupenyu hwefirimu yependi. Iko kuenderana kwemavara eanenge ese maitiro mune ane mavara pateni pendi haina kupatsanurwa kubva kune titanium dioxide.
Mhando dzakasiyana dzekupfeka kwezvinangwa zvakasiyana zvine zvakasiyana zvinodiwa kune titanium dioxide. Semuenzaniso, kupfekedzwa kweupfu kunoda kushandisa rutile titanium yakasviba ine yakanaka inopararira. Anatase titanium yakasviba ine yakaderera decoloring simba uye yakasimba photochemical chiitiko. Kana ichishandiswa mukupfeka zveupfu, iyo yekumonera firimu inowanzoita yero. Iyo rutile titanium yakasviba inogadzirwa neiyo sulfuric acid nzira ine zvakwakanakira zvemutengo wakadzikama, kupararira kwakanaka, simba rakanaka rekuhwanda uye nerudzi kudzikisa simba, uye inokodzera kwazvo zvemukati mehupfu hwekupfeka. Pamusoro pekupararira kwakanaka, kuviga simba uye nerudzi kudzikisa simba, titanium yakasviba yezvipoda zvekunze zveupfu inodawo yakanaka mamiriro ekunze. Naizvozvo, titanium yeupfu yekunze poda kupfeka inowanzo iri rutile titanium yakasviba inogadzirwa neklorination.
2. Kuongororwa kwemakakatanwa ehunhu hukuru hwekuchinja kwe titanium dioxide pane machira
Titanium yakasviba inoshandiswa seye chena pigment yezvipfeko. Kuchena kwaro kwakanyanya kukosha uye ndeimwe yeakakosha emhando zviratidzi anodikanwa nekupfeka. Iyo yakasviba kuchena ye titanium dioxide inokanganisa zvakananga kutaridzika kweiyo yekumhara firimu. Chinhu chikuru chinokonzeresa kuchena kwe titanium dioxide ndiyo mhando nezviri mukati mezvinhu zvinokuvadza, nekuti titanium yakasviba inonamira zvakanyanya kune tsvina, kunyanya rutile titanium dioxide.
Naizvozvo, kunyangwe hushoma hushoma huchava nehunhu hwakakura mukuchena kwe titanium dioxide. Kuchena kweiyo titanium yakasviba inogadzirwa neiyo chloride maitiro inowanzo kuve iri nani pane iyo inogadzirwa neiyo sulfuric acid maitiro. Izvi zvinodaro nekuti iyo yakasvibirira titanium tetrachloride inoshandiswa mukugadzira titanium dioxide nemaitiro echloride yakavezwa uye kucheneswa, uye yayo yakasviba zvemukati iri shoma, nepo sulfuric acid maitiro ichishandisa Iyo mbishi zvinhu zvine yakanyanya kusachena zvemukati, izvo zvinogona chete kubviswa nekuwacha uye nzira dzekuchenesa.
2 kuviga simba
Simba rekuhwanda ndiyo nzvimbo yepanzvimbo pechinhu chakafukidzwa pasentimita imwe chete. Kana yakafukidzwa zvakakwana, nzvimbo imwechete yakapendwa. Iyo inowedzera simba rekuhwanda kwetitanium yakasviba yakashandiswa, iyo yakatetepa iyo yekumonera firimu inogona kuva, uye yakaderera huwandu hwepende inodikanwa, Iyo shoma huwandu hwetitanium yakasviba inodiwa, kana simba rekuhwanda re titanium dioxide richiderera, kuitira kuzadzisa zvakafanana kufukidza maitiro, huwandu hwetitanium yakasviba inoda kuwedzerwa, mutengo wekugadzira uchawedzera, uye kuwedzera kwehuwandu hwetitanium dioxide kunokonzera iyo titanium dioxide mune yekumhara.Zvakaoma kupararira zvakafanana, uye kuunganidzwa kunoitika, uko zvakare inokanganisa iko kufukidza kwekufuka.
3 mamiriro ekunze kuramba
kupfeka kunoda yakanyanya mamiriro ekunze kusagadzikana kwe titanium dioxide, kunyanya kune ekunze ekunze machira, ayo anoda yakanyanya mamiriro ekunze kusagadzikana kana Ultra-yakanyanya mamiriro ekunze kusagadzikana Uchishandisa titanium yakasviba ine yakaderera mamiriro ekunze kusagadzikana, iyo yekumhara firimu ichave nematambudziko senge kupera, kutsvuka, chalking, kutsemuka, uye kubvisa. Iyo yekristaro chimiro che rutile titanium yakasviba yakatetepa pane iyo yeatase titanium dioxide, uye yayo photochemical chiitiko chiri pasi. Naizvozvo, kusagadzikana kwemamiriro ekunze kwakanyanya kwazvo kupfuura iyo yeatase titanium yakasviba. Naizvozvo, iyo titanium yakasviba inoshandiswa kupfekedza iri chaizvo rutile titanium yakasviba. Maitiro makuru ekugadzirisa kusagadzikana kwemamiriro ekunze kwetitanium yakasviba ndeye kuita zvisirizvo zvekumusoro kurapwa, ndiko kuti, kupfeka imwe kana kupfuura mamwe marara einorganic oxides kana hydrated oxides pamusoro pe titanium dioxide inodzika.
Titanium yakasviba yakasarudzika-yakanaka zvidimbu zvine yakakura yakatarwa nzvimbo nzvimbo uye yakakwira pamusoro simba. Izvo zviri nyore kuunganidzwa pakati pezvimedu uye zvinonetsa kupararira zvine mutsindo mumajasi. Kupararira kwakashata kwe titanium dioxide kunokanganisa zvimiro zvaro zvemaziso zvakaita sekuderedzwa kwemavara, kuviga simba uye kubwinya kwepasi mukati mekupfekedza, uye zvakare kunokanganisa kugadzikana kwekuchengetedza, kuyerera, kuenzanisa, kugadzikana kwekuvhara, uye kurwisa kwekupfeka. Kunyorera zvivakwa senge magetsi kudonhedza uye kuitisa kunokanganisawo mutengo wekugadzira, nekuti simba rekushandisa kukuya nekuparadzira mashandiro akanyanya, kuverenga kwakawanda kwesimba rekushandisa kwesimba rekugadzira, uye kurasikirwa kwemidziyo kwakakura .
Chidimbu che titanium dioxide yanga ichikwira gore rino, kunyanya kune iyo titanium dioxide inoshandiswa muindasitiri yendege ye lithiamu-ion, iyo ichiri kungofanirwa kuvimba nekutenga zvinhu kunze kwenyika. Sekudzikira kwetitanium yakasviba, machira anokanganiswa nedutu renharaunda, uye huwandu hukuru hwemabhizinesi madiki nepakati akavharwa. Mune ramangwana, huwandu hwetitanium yakasviba mumusika wekupfeka uchadererawo.